उपभोक्ताको टाउकोमा प्रत्यक्ष महँगीको भार, सरकारले के मा कति कर लगायाे ? - Upabhokta Nepal
उपभोक्ताको टाउकोमा प्रत्यक्ष महँगीको भार, सरकारले के मा कति कर लगायाे ?
Reporter	काठमाडौं	फागुन १६, २०७६
काठमाडौं । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेटको आकार नै घटाएको सरकारले फेरि विकास निर्माणका नाममा एकपछि अर्को कर थपेको छ। सरकारले पेट्रोलियममा विकास करका नाममा फेरि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। यसअघि सरकारले भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। बिहीबारदेखि सरकारले थपेको अतिरिक्त पाँच रुपैयाँ गरी अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ विकास खर्चका नाममा असुलिने भएको छ।
वृद्धि गरिएको विकास करका कारण अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमा प्रत्यक्ष महँगीको भार थपिने भएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले डिजेल, पेट्रोल तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ विकास कर थपिएको जानकारी दिएका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियममा यस्तो कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
२०७६ फागुन १६ गते शुक्रवार ११:११ बजे प्रकाशित
उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट एकाएक जस्तापाता खसेपछि स्थानीय त्रसित, कम्पनी माैन
दुधजन्य पदार्थमा हानिकारक रसायन मिसाउन अनुमति दिएका छैनौं : विभाग